महिला कर्मचारीसँगको लसपसबारे बिल गेट्समाथि छानविन ! – Action Media
महिला कर्मचारीसँगको लसपसबारे बिल गेट्समाथि छानविन !
उक्त विषयमा छानविन हुँदै गर्दा कतिपय बोर्ड सदस्यहरुले छानविन टुंगोमा नपुगुन्जेल आरोपित व्यक्ति बिल गेट्स बोर्ड सदस्यमा बसिराख्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तत् पश्चात् बोर्डको छानविन पूरा नहुँदै गेट्सले राजीनामा दिएका थिए ।
वालस्ट्रिट जर्नलमा बिल गेट्ससँग सम्बन्धमा रहेको भनिएकी ती महिला कर्मचारीको नाम खुलाएको छैन ।
Prevस्वास्थ्यको तथ्यांक : उपत्यकाका अस्पतालमा १०४० बेड खाली (सूचीसहित)
Nextभोजले फैलायो पाहुनाले भित्र्याएको कोरोना